Accueil > Gazetin'ny nosy > Raharaha Claudine Razaimamonjy
Raharaha Claudine Razaimamonjy
Misy profesora amin’ny fitsaboana terena hanao sonia ?
Tsy re firy tao ho ao ny raharaha Razaimamonjy Claudine . Ny baraingo tsikaritra farany izao, tapa-bolana teo izay dia hoe « tsy any amin’ny fonjan’i Manjakandriana izay nambara fa nitanana azy mandra-piandry ny fitsarana azy intsony izy ».
Fa eo anivon’ny fitondram-panjakana dia mbola mandeha ny tetika isan-karazany handefasana an’i Claudine Razaimamonjy hivoaka any ampita ka amin’ny alalan’ny fitsaboana azy ihany no tetika ho amin’izany.
Misamboaravoara sy misavorovoro be ihany tokoa mantsy amin’izao fotoana ny tontolom-piaraha-monina ao anivon’ireo samy Profesora amin’ny seha-pitsaboana ao amin’ny Hopitaly Ravoahangy Andrianavalona satria misy ny didy midina na baiko, manery an’ireo profesora ireo hanao sonia an’io taratasy hanomezana alalana an-dRazaimamonjy Claudine io halefa mitsabo tena any ampita . Ampandosirina e !
Saika mitsipaka sy manda tsy misy mety manao sonia an’izany ireo profesora ka zary mifanilika aloha hatreto.
Manara-maso ny momba izany ny maro.